Cristiano Ronaldo Oo Markale looga yeeray Maxkamad dalka Spain ah iyo Ciqaabta uu lakulmi doono? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(15-12-2018) Maxkamad ku taalla dalka Spain ayaa go’aamisay xilliga ay dhegaysan doonto dacwad la xidhiidha lunsi cashuuro oo ka dhan ah laacibka Juventus ee Cristiano Ronaldo.
Xiddiga reer Portugal ayaa dhawaan heshiis la gaadhay waaxda maaliyadda dalka Spain kaddib markii uu ogolaaday inuu bixiyo 14.7 milyan oo Euro, taas oo fududaynaysa inuu ka badbaado in xukun ciqaabeed sababa xadhig uu ku dhaco.
Ronaldo ayaa 13.4 milyan ka mid ah lacagtan bixiyey horraanta bishii October ee sannadkan, laakiin waxa aan qabsoomin kulankii maxkamadda horteeda ee uu ku qiran lahaa dembiyada loo haysto, hase yeeshee lama filayo in labada sannadood ee xadhiga ah ay noqdaan kuwa la hirgeliyo maadaama sharcigu sheegayo in wixii laba sannadood ka badan oo kaliya xabsiga loo taxaabayo.
Cristiano Ronaldo ayaa la sheegay in fadhiga maskamadda uu kaga qayb-geli doono khadka isgaadhsiinta oo muuqaal ah, halkaas oo uu kaga jawaabi doono su’aalaha la weydiiyo, isla markaana uu xukunkiisa ka dhegaysan doono.